China Aspirator Averlast-25B orinasa sy mpanamboatra | AngelBiss
Araka ny fantatry ny besinimaro fa ny fitandroana ny fofonaina madio dia ilaina amin'ny fahasalamana.
Amin'izao fotoana izao dia olona marobe no mararin'ny bronchitis ary mahatsiaro ho sarotra sputum. Indrindra ho an'ny loholona. Indraindray izy ireo mahatsapa fa misy sputum voasakana ao amin'ny tenda, ary tsy azony atao ny mikohaka. Tena hampidi-doza izany.
AngelBiss Portable Suction Machine dia hihatra amin'ity toe-javatra maika ity. Raha vao manana azy ianao, ireto milina fitrohana azo entina ireto dia hanome anao ny fomba haingana sy azo antoka hiatrehana ny toe-javatra.
Ny milina fantsom-panafody AngelBiss dia avy amin'ny fikorianan'ny rivotra 18L sy 25L.
Noho izany azafady, misafidiana mety amin'ny fangatahanao manokana arakaraka ny torolalan'ny dokotera.
Previous: Mpanentana oksizenina ara-pahasalamana
Manaraka: Masinin-tsofina Portable Dentistry